Let's talk about IT: CVS to Git migration
ဟိုတစ်လောက အလုပ်ထဲမှာ source code repository ကို CVS ကနေ Git ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီး Git server setup လုပ်ထားတာကြာပါပြီ ။ ထပ်ရတယ့် project အသစ်တွေသာ Git မှာသုံးပြီး အဟောင်းတွေ CVS ကနေ မပြောင်းဖြစ်သေးဘူး။ Project တာဝန်ခံက ဒီ project migrate ပေးပါလို့ဆိုမှ ကျနော်က ပြောင်းပေးရတာ။ သူတို့လည်း ပျင်းလို့ထင်တယ် ။ ဘယ်သူမှ လာမပြောကြဘူး။ ဒီနေ့တော့ အရင် Project အဟောင်းလေးခု migrate လုပ်ဖြစ်တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ။ Git က CVS ကို ကောင်းကောင်းနားလည်းပါတယ်။ သူ့ဟာသူ ဝင် checkout လုပ်ပြီး fetch သွားတာပဲ။ ကျနော်တို့ သိဖို့လိုတာဆိုလို့ CVS server IP ၊ CVS accessible account တစ်ခု၊ CVSROOT path နဲ့ migrate လုပ်ချင်တယ့် CVS နာမည်ပဲလိုပါတယ်။
1. ပထမဆုံး လိုအပ်တယ့် tools တွေအရင်စစ်ရမယ်။ cvsimport က git-core ထဲမှာ ပါလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် distro ကပြန်ပြီး package တွေခွဲထားတာမျိုးဆိုရင် မပါတတ်ပါဘူး။ Fedora မှာဆို git-core အပြင် git-cvs ကိုသက်သက် install ပြန်လုပ်ရပါတယ်။ ကို install ထားတယ့် git-core ထဲမှာ cvsimport ပါမပါကို git help -a နဲ့ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Support လုပ်တယ့် git command တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ မျက်စိနောက်ရင် grep နဲ့ filter လုပ်ကြည့်ပေါ့။ git help -a | grep cvsimport လို့ filter လုပ်ကြည့်ပါ။
2. နောက်တစ်ခုက cvsps command line tools ရှိမရှိကြည့်ပါ။ CVS patchset generate လုပ်တယ့် tools ပါ။ Patchset ဆိုတာကတော့ change history တွေ၊ revision information တွေ၊ commit history တွေကို CVS log ကနေ patch set ပြောင်းပေးပါတယ်။ ( ပက်စက်တယ်ပေါ့ဗျာ )။
3. CVS server ကို login လုပ်မယ့် credential ကို အရင် prepare လုပ်ထားရအောင် ။ ဒီအဆင့်က optional ပါ။ ဒါပေမယ့် CVS ထဲက repo တစ်ခုမက ခဏခဏ migrate လုပ်ဖို့လိုရင်တော့ ဒီအဆင့်လေးကို ကျော်မသွားတာကောင်းပါတယ်။ Command syntax ကတော့
CVSROOT=:cvs-login-method:cvs-user-name@cvs.server.name:/path/to/CVS/root cvs login
ဒီမှာ cvs-login-method ၊ username ၊ servername ၊ CVSROOT path တွေကို အစားထိုးရပါမယ်။ ဥပမာ cvs-login-method က pserver၊ username က ngar ၊ Servername / IP က 1.2.3.4 ၊ CVSROOT path က /share/cvs ဆိုပါတော့၊ ဒါဆို ဒီလိုဖြစ်သွားပါမယ် ။
CVSROOT=:pserver:ngar@1.2.3.4:/share/cvs cvs login
ဒါဆို password ရိုက်ဖို့ prompt လုပ်လိမ့်မယ်။ Password ရိုက်လိုက်ရင် password ကို hash လုပ်ပြီး ကိုယ့် $HOME အောက်မှာ .cvspass ဆိုတယ့် file နဲ့ သွားသိမ်းပါလိမ့်မယ်။
4. နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ( အခုမှ စတာပါ တကယ်က ) CVS ကို Git အနေနဲ့ import လုပ်ပါတယ်။ Command syntax ကတော့
git cvsimport -v -d :cvs-login-method:username@servername:/CVSROOT cvs-module-name -C output-directory-name.git
ခုနက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တယ့် server ပေါ်က zephyr ဆိုတယ့် CVS module ကို import လုပ်ချင်တာဆိုရင် command က ဒီလိုဖြစ်သွားပါမယ်။
git cvsimport -v -d :pserver:ngar@1.2.3.4:/share/cvs zephyr -C zephyr.git
ဒါဆို CVS ကနေ checkout လုပ်ပြီး Git repo အဖြစ်နဲ့ import လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဇိုက်ဖာရ် ဒေါ့ ဂစ် ဆိုပြီး Git repo တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။
အမှန်က ဒါကို Server ကို master အနေနဲ့ ပြန် push လုပ်ပေးရပါတယ်။ ကျနော်လို ငပျင်းကတော့ တစ်ခါ import လုပ် တစ်ခါ push လုပ်၊ နှစ်ခါ အချိန်ကုန်မခံပါဘူး။ Server ပေါ်ကနေပဲ import လုပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် repo directory (e.g: zephyr.git) ရဲ့အောက်မှာရှိတယ့် .git ထဲက file တွေ folder တွေကို ကူးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ .git ( dot git ) ရဲ့အောက်မှာ Description တို့ ၊ head တို့ ၊ hook တို့၊ refs တို့ နဲ့အတူ branches တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေ အပြင်ကို ကူးထုတ်လိုက်ရင် တခြား git client တစ်ခုကနေ clone/pull လို့ရပါပြီ။
Nearly Related Post:
Git Plug In
Posted by Divinity at 3:07 AM
Labels: Divinity, free version control, git, version control
At last, you did it.
နောက်ဆုံးတော့ မင်းလုပ်ချလိုက်ပြီ။ ဟမ်။